MINNEAPOLIS: Ilhaan Cumar oo loo dhaariyey xildhibaannimada gobolka Minnesota iyo kutubka qur`aanka oo gacanta loo saaray | Warsugan News
Home Wararka MINNEAPOLIS: Ilhaan Cumar oo loo dhaariyey xildhibaannimada gobolka Minnesota iyo kutubka qur`aanka oo gacanta loo saaray
MINNEAPOLIS: Ilhaan Cumar oo loo dhaariyey xildhibaannimada gobolka Minnesota iyo kutubka qur`aanka oo gacanta loo saaray
Ilhaan Cumar oo ah gabar soomaaliyeed islamarkaana sanadkii hore ku guuleysatay xildhibaannimada gobolka Minnesota ee dalkaasi Mareykanka ayaa xalay loo dhaariyey xilkaasi, iyadoona lagu dhaariyay kutubka qur`aanka karoomka.
Xafladda dhaarinta oo ka dhacdey aqalka Senate ee gobolkaasi ayaa kasoo qeyb galay dadweyne farabadan iyo madax kala duwan.
Sanadkii hore ayay aheyd markii Ilhaan Cumar ay ku guuleysatay xildhibaanimada gobolka Minnesota kaddib doorasho adag oo ay gashay.
Shacabka soomaaliyeed ayaa aad usoo dhaweeyay guusha iyo waliba dhaarinta shalay ay martay xildhibaanad Ilhaan Cumar.
Previous PostINDONESIA: Wade diyaaradeed oo isagoo cabsan oo dhac-dhacaya soo shaqo tagay Next PostKulan Saddex-Geesood ah oo ka dhacay Xarunta Madaxtooyada oo u dhexeeyey Xukuumadda, Ganacsatada Xoolaha dhoofiya iyo Masuuliyiinta Maxjarrada Berbera + Sawiro